Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Wararkii Ugu Dambeeyay Al-Shabaab oo Dagaal xoogan kula wareegtay Degaanka Ruunir-Good
August 22 2017 00:53:07
Wararkii Ugu Dambeeyay Al-Shabaab oo Dagaal xoogan kula wareegtay Degaanka Ruunir-Good
Wararka ka imaanaya degaanka Ruunir-Good ee gobolka Shabeelaha Dhaxe, ayaa sheegaya in saakay halkaasi uu ka qarxay dagaal aad u xoogan oo u dhaxeeyay Dagaalyahanada Al-Shabaab iyo Ciidamada milatariga Soomaaliya.
Dagaalka ayaa qarxay kadib markii dagaalyahano aad u hubeesan oo katirsan Al-Shabaab ay dhoor jiho ka weerareen ciidamada Dowlada ee ku sugnaa degaanka Ruunir-Good ee shalay kala wareegeen dagaalyahanada Al-Shabaab.
Sida aan Wararka ku heleyno dagaal xoogan oo saacado socday ayaa dagaalyahanada AL-Shabaab waxaa ugu suurto gashay in ay dib ula wareegaan degaanka Ruunir-Good, waxaana halkaasi dagaal looga saaray ciidamada Milatariga Soomaaliya.
Dagaalka ayaa lagu soo waramayaa in uu ka dhashay qasaaro aad u xoogan, waxaana wararka soo baxaya sheegayaaan in dagaalka lagu dilay ciidamo katirsan milatariga sidoo kale lagu qabsaday gaadiid dagaal iyo hub.
Al-Shabaab saraakiil u hadashay ayaa sheegay in dagaalka Ruunir-good ay guulo ka gaareen ayna ku dileen saraakiil iyo ciidamo katirsan milatariga Soomaaliya, waxa ay sidoo kale xuseen in ay ku qabsadeen hub iyo gaadiid dagaal.
Wali ma jio wax war ah oo kasoo baxay taliska ciidanka Milatariga Soomaaliya iyo maamulka gobolka Shabeelaha Dhaxe ee ku aadan dagaalka ka dhacay Ruunir-Good iyo la wareegida Al-Shabaab ay dib ula wareegeen degmadaasi.
Waxii Warar dheeraad ah ee kusoo kordha kala Soco Wararkayaga Dambe Insha Allah.
Xasfiiska Shabakada Allbanaadir.com
· mamaan on May 01 2016 ·